Gareth Bale oo dib ugu soo laabtay Tottenham – Gool FM
(London) 17 Sebt 2020. Warsidaha Caanka ah ee Sportsmail ayaa ku adkeesanaya in Gareth Bale uu dhammeystiray heshiis uu dib ugu soo laabanayo naadigiisii hore ee Tottenham.
Heshiiska waxaa dabada ka riixayay Jose Mourinho waxaana la sheegayaa in laacibka dheereeya ee reer Wales uu ogolaaday heshiis hal sano oo amaah kaa uu ku qaadan doono adduun dhan 13-milyan oo bound iyadoo lacagtaasi qeyb ka mid ah ay bixin doonto Real Madrid.
Sportsmail ayaa sidoo kale xaqiijineysa in heshiiska labada dhinac uusan wax qeyb ah ka ahayn ciyaaryahano kale oo la kala badeshay si ay heshiiska Bale qeyb uga noqdaan.
Ma cadda ilaa hadda waqtiga ay Sprus si rasmi ah ugu dhawaaqi doonto heshiiska ay kula soo wareegtay laacibkeedii hore kaa oo todobo sano ka hor ka tagay kooxda xilli ay khamiista la ciyaari doonaan naadiga Lokomotiv Plovdiv kulan ka tirsan Premier League.
Bale ayaa waqti qurxoon ku qaaday gegada Bernabeu ee kooxda Real Madrid isagoo 4-jeer kula guuleystay koobka ugu qaalisan Yurub ee Champions League.
Xiddigaas Chelsea la qaaday Premier League hadda ma garan kartid....(DAAWO SAWIRRO)